Aung La N Sang နဲ့ Ken Hasegawa ဘယ်သူနိုင်မလဲ
အောင်လအန်ဆန် (Aung La N Sang) အနေနဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်နိုင်ပါ့မလား
27 Jun 2018 . 11:34 AM
‘ONE Championship: Spirit Of A Warrior’ လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲကို ဇွန်လ (၂၉) ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအားကစားရုံမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းနဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန် (Aung La N Sang) ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံသား ကန်ဟာဆေးဂါဝါ (Ken Hasegawa) နဲ့ ထိုးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့စပါးအုံးမြွေလို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်အနေနဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲဖြစ်လာပြီး တကယ်လို့ ရှုံးနိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ခါးပတ်ကို လက်လွှတ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုပဲ စွန့်လွှတ်ရမှာပါ။)
ကန်ဟာဆေးဂါဝါကိုတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ ဂျပန်အခြေစိုက် ‘Deep MMA’ မှာ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး ‘One Championship’ အနေနဲ့ အခုမှသာ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ပွဲဦးထွက်မှာပဲ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်လုပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကန်ဟာဆေးဂါဝါ အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ပွဲတည်းထိုးသတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ရာဇဝင်ကျန်သွားမှာပါ။ (တစ်ပွဲတည်းထိုးရုံနဲ့ ဘယ် MMA အဖွဲ့အစည်းမှာမှ ချန်ပီယံမဖြစ်ပါဘူး) ။ အခုလိုဖြစ်နေတာတွေက ‘One Championship’ ဟာ နှစ်ရှည်စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ပင်တိုင်ကစားသမားနည်းပါးနေတာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပခါနီးမှ တွေ့ရာလူကို ဆွဲခေါ်နေရတဲ့သဘောပါ။ ဒီနေရာမှာ ခါးပတ်လုကြမယ့်ကစားသမားတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို ဝေဖန်လိုတာ မဟုတ်ဘဲ ‘One Championship’ ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကိုသာ ဦးတည်လိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ . . . ဒါဆို ကန်ဟာဆေးဂါဝါက ဘယ်သူလဲ။ သူဟာ ၁၉၈၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး MMA ကစားသမားဘဝကိုတော့ ၂ဝ၁ဝခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉) ပွဲထိုးသတ်ခဲ့ပြီး (၁၆) ပွဲနိုင်၊ (၁) ပွဲသရေနဲ့ (၂) ပွဲရှုံး ရလဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူဟာ ‘Deep MMA’ ရဲ့ အလွတ်တန်းချန်ပီယံ (Megaton Champion) လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၈၅ ပေါင် (၈၃.၉၁ ကီလိုဂရမ်) နဲ့ အရပ်အမြင့် ၁၈ဝ စင်တီမီတာ (၅ပေ ၁၁လက်မ) ရှိပါတယ်။ Ground Fight နဲ့ Stand Fight ကို မျှတအောင် ကစားနိုင်သူဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံး MMA ကစားသမားလို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ (၃၁) နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကန်ဟာဆေးဂါဝါဟာ အစောပိုင်းအချီတွေမှာပဲ အလဲထိုးတတ်လို့ ပွဲကြမ်းမယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်ကို ခေါင်ပွဲ (Main Card) ထားပြီး ကျင်းပခဲ့တဲ့ ‘One Championship’ ပြိုင်ပွဲတွေက တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခဲနက်အောင်မြင်နေတာက သိထားလေတော့ ရွှေဥတစ်နေ့တစ်လုံး ဥပေးနေတဲ့ ငန်းကြီးကိုတော့ ရိုက်မချက်လောက်ပါဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ‘One Championship’ က အောင်လအန်ဆန်ကို အလိန်းဂါလာနီ (Alain Ngalani) နဲ့ အလက်ဇန်းဒါး မာချာဒို (Alexandre Machado) တို့လို ပွဲဝေးနေတဲ့ သက်ကြားအိုကြီးတွေနဲ့ တည်ပေးခဲ့တာပါ။ သူတို့လည်း ဝင်ငွေကောင်းသလို မြန်မာပရိသတ်တွေလည်း ပျော်ရတာပေါ့။
တကယ်တမ်းသုံးသပ်ရရင် အောင်လအန်ဆန်ဟာ သူအားသာတဲ့ ချုပ်သိုင်းနဲ့ ပွဲသိမ်းတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် အားပါပြင်းထန်တဲ့ အမြင့်ခြေကန်ချက်၊ တွဲလုံးလက်သီးတွေလည်း စုံလင်လှပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်ရဲ့အခြေအနေကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သုံးသပ်နိုင်သူဖြစ်ပြီး ဥာဏ်ရည်မြင့်ကစားသမားလို့ဆိုရမှာပါ။
မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းနဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ဟာ (၃၂) ပွဲထိုးသတ်ခဲ့ပြီး (၂၂) ပွဲနိုင်၊ (၁ဝ) ပွဲရှုံး ရလဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အမိမြေမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တိုင်းမှာ ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲရခဲ့ပြီး ‘ဗစ်တာလီ ဘစ်ဒက်ရှ်’ ၊ အလိန်းဂါလာနီနဲ့ အလက်ဇန်းဒါး မာချာဒိုတို့ကို သုံးပွဲဆက်အနိုင်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ အမိမြေမှာတော့ အောင်လအန်ဆန်ပဲ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းခါးပတ်ကို ကာကွယ်သွားမယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။
အောငျလအနျဆနျ (Aung La N Sang) အနနေဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျနိုငျပါ့မလား
‘ONE Championship: Spirit Of A Warrior’ လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလုပှဲကို ဇှနျလ (၂၉) ရကျနေ့ ရနျကုနျမွို့ သုဝဏ်ဏအားကစားရုံမှာ ကငျြးပမှာဖွဈပွီး လိုကျဟဲဗီးဝိတျတနျးနဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျ (Aung La N Sang) ဟာ ဂပြနျနိုငျငံသား ကနျဟာဆေးဂါဝါ (Ken Hasegawa) နဲ့ ထိုးသတျရမှာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာ့စပါးအုံးမွှလေို့ နာမညျပွောငျပေးထားတဲ့ အောငျလအနျဆနျအနနေဲ့ မဈဒယျဝိတျခနျြပီယံကာကှယျပှဲဖွဈလာပွီး တကယျလို့ ရှုံးနိမျ့သှားမယျဆိုရငျတောငျ လိုကျဟဲဗီးဝိတျခါးပတျကို လကျလှတျရမှာ မဟုတျပါဘူး။ (မဈဒယျဝိတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဘှဲ့ကိုပဲ စှနျ့လှတျရမှာပါ။)
ကနျဟာဆေးဂါဝါကိုတော့ မွနျမာပရိသတျတှေ ရငျးနှီးမှာ မဟုတျပါဘူး။ သူဟာ ဂပြနျအခွစေိုကျ ‘Deep MMA’ မှာ ထိုးသတျခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖွဈပွီး ‘One Championship’ အနနေဲ့ အခုမှသာ စာခြုပျခြုပျခဲ့တာပါ။ သူဟာ ပှဲဦးထှကျမှာပဲ မဈဒယျဝိတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံခါးပတျလုပှဲကို ယှဉျပွိုငျခှငျ့ရတာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ ကနျဟာဆေးဂါဝါ အနိုငျရခဲ့မယျဆိုရငျတော့ တဈပှဲတညျးထိုးသတျပွီး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဘှဲ့ရတယျဆိုတဲ့ ရာဇဝငျကနျြသှားမှာပါ။ (တဈပှဲတညျးထိုးရုံနဲ့ ဘယျ MMA အဖှဲ့အစညျးမှာမှ ခနျြပီယံမဖွဈပါဘူး) ။ အခုလိုဖွဈနတောတှကေ ‘One Championship’ ဟာ နှဈရှညျစာခြုပျခြုပျထားတဲ့ ပငျတိုငျကစားသမားနညျးပါးနတောဖွဈပွီး ပွိုငျပှဲကငျြးပခါနီးမှ တှရေ့ာလူကို ဆှဲချေါနရေတဲ့သဘောပါ။ ဒီနရောမှာ ခါးပတျလုကွမယျ့ကစားသမားတှရေဲ့ အရညျအခငျြးကို ဝဖေနျလိုတာ မဟုတျဘဲ ‘One Championship’ ရဲ့စီမံခနျ့ခှဲမှုအပိုငျးကိုသာ ဦးတညျလိုတာဖွဈပါတယျ။
ကဲ . . . ဒါဆို ကနျဟာဆေးဂါဝါက ဘယျသူလဲ။ သူဟာ ၁၉၈၇ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ (၂၆) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး MMA ကစားသမားဘဝကိုတော့ ၂ဝ၁ဝခုနှဈမှာ စတငျခဲ့ပါတယျ။ (၁၉) ပှဲထိုးသတျခဲ့ပွီး (၁၆) ပှဲနိုငျ၊ (၁) ပှဲသရနေဲ့ (၂) ပှဲရှုံး ရလဒျကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ သူဟာ ‘Deep MMA’ ရဲ့ အလှတျတနျးခနျြပီယံ (Megaton Champion) လညျးဖွဈပါတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျ ၁၈၅ ပေါငျ (၈၃.၉၁ ကီလိုဂရမျ) နဲ့ အရပျအမွငျ့ ၁၈ဝ စငျတီမီတာ (၅ပေ ၁၁လကျမ) ရှိပါတယျ။ Ground Fight နဲ့ Stand Fight ကို မြှတအောငျ ကစားနိုငျသူဖွဈပွီး ဂပြနျနိုငျငံရဲ့အကောငျးဆုံး MMA ကစားသမားလို့ သတျမှတျထားကွပါတယျ။ (၃၁) နှဈသာရှိသေးတဲ့ ကနျဟာဆေးဂါဝါဟာ အစောပိုငျးအခြီတှမှောပဲ အလဲထိုးတတျလို့ ပှဲကွမျးမယျလို့ သုံးသပျရပါတယျ။
အောငျလအနျဆနျကို ခေါငျပှဲ (Main Card) ထားပွီး ကငျြးပခဲ့တဲ့ ‘One Championship’ ပွိုငျပှဲတှကေ တခွားနိုငျငံတှနေဲ့အတူ မွနျမာနိုငျငံမှာ တခဲနကျအောငျမွငျနတောက သိထားလတေော့ ရှဥေတဈနတေ့ဈလုံး ဥပေးနတေဲ့ ငနျးကွီးကိုတော့ ရိုကျမခကျြလောကျပါဘူးလို့ သုံးသပျမိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး ‘One Championship’ က အောငျလအနျဆနျကို အလိနျးဂါလာနီ (Alain Ngalani) နဲ့ အလကျဇနျးဒါး မာခြာဒို (Alexandre Machado) တို့လို ပှဲဝေးနတေဲ့ သကျကွားအိုကွီးတှနေဲ့ တညျပေးခဲ့တာပါ။ သူတို့လညျး ဝငျငှကေောငျးသလို မွနျမာပရိသတျတှလေညျး ပြျောရတာပေါ့။
တကယျတမျးသုံးသပျရရငျ အောငျလအနျဆနျဟာ သူအားသာတဲ့ ခြုပျသိုငျးနဲ့ ပှဲသိမျးတတျတယျဆိုပမေယျ့ အားပါပွငျးထနျတဲ့ အမွငျ့ခွကေနျခကျြ၊ တှဲလုံးလကျသီးတှလေညျး စုံလငျလှပါတယျ။ ပွိုငျဘကျရဲ့အခွအေနကေို စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး သုံးသပျနိုငျသူဖွဈပွီး ဉာဏျရညျမွငျ့ကစားသမားလို့ဆိုရမှာပါ။
မဈဒယျဝိတျတနျးနဲ့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျဟာ (၃၂) ပှဲထိုးသတျခဲ့ပွီး (၂၂) ပှဲနိုငျ၊ (၁ဝ) ပှဲရှုံး ရလဒျကို ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ အမိမွမှော ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတိုငျးမှာ ရာနှုနျးပွညျ့နိုငျပှဲရခဲ့ပွီး ‘ဗဈတာလီ ဘဈဒကျရျှ’ ၊ အလိနျးဂါလာနီနဲ့ အလကျဇနျးဒါး မာခြာဒိုတို့ကို သုံးပှဲဆကျအနိုငျရရှိထားသူဖွဈပါတယျ။ အမိမွမှောတော့ အောငျလအနျဆနျပဲ မဈဒယျဝိတျတနျးခါးပတျကို ကာကှယျသှားမယျလို့ သုံးသပျမိပါတယျ။